Maxkamadeynta wariyaal ka kala tirsan Shabeelle, Sky iyo Risaala oo dib loo dhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay 3 wariye oo u kala shaqeeya Radio Shabeelle iyo SKY FM oo leysla leeyahay iyo wariye kale oo u shaqeeya Radio Risaala oo ku yaalla Muqdisho.
Dhanka Shabakadda Shabelle waxaa maxkamadda lasoo taagay Wariye Maxamed Bashiir Xaashi iyo Wariye Maxamuud Maxamed Daahir (Carab), kuwaasoo muddo dhowr bilood ah ku xiran Xabsiga Dhexe ee Xamar.
Markii maxkamadda la furay ayaa waxaa dood ka dhalatay inaan Xeer Ilaalintu keenin eedeymo buuxa, taasoo keentay in qareenadu dalbadaan in lasoo daayo labada wariye maadaama muddo dheer ay xiran yihiin.
Sidoo kale, waxaa maxkamadda lasoo taagay wariye Maxamed Cabdi Cali, kaasoo muddo 40 cisho ah ku xirnaa Xabsiga dhexe ee Xamar, welina kiiskiisa go’aan cad maxkamada Gobolka kama aysan qaadan.